Football Khabar » ला लिगाको उपाधि होडलाई लिएर ‘होच्याएपछि’ जिदानले पत्रकारको यसरी सातो लिए
स्पेनिस फुटबल क्लब रियल मड्रिडका प्रमुख प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले आफ्नो आलोचना गर्ने मिडिया र पत्रकारको सातो लिएका छन् । रियलले आज शनिबार ला लिगामा हुएस्कासँगको खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुनेक्रममा मिडिया र जिदानबीच निकै चर्काचर्की भयो । मोटामोटी रूपमा खरो रूपमा प्रस्तुत भएका फ्रेन्च कोचले आफ्नो आलोचनामा उत्रिएका पत्रकालाई राम्रैसँग थर्काए ।
रियल जारी सिजन घरेलु लिगमा खराब अवस्थामा रहेको र उपाधि होडमा नरहेको विषयमा कुरा गर्दै पत्रकारले जिदानलाई राजीनामा कहिले दिने भनेर प्रश्न गरेका थिए । केही समयअघिबाटै रियलको प्रदर्शनलाई लिएर मिडियाले खुलेरै आलोचना गर्दै आएका थिए । तर, यसपटक मिडियाले जिदानको जवाफ पाए । सोक्रममा जिदानले आफूहरू गत सिजन ला लिगाको च्याम्पियन रहेको कुरा सम्झाउँदै थोरै सम्मान गरेर कुरा गर्न भन्दै धम्क्याए ।
‘हामीले के प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई हेरेर पनि थोरै सम्मान गर्नहोस् । तपाईंहरू किन भन्नुुहुन्न कि, तपाईंहरू म यो क्लबबाट बाहिर भएको हेर्न चाहुनुहन्छ ? तपाईंहरूले भनेपछि मैले राजीनामा दिनुपर्ने हो ?,’ जिदानले रिसाउँदै भने ।
जिदान त्यत्तिमै रोकिएनन् । उनले अघि थपे, ‘तपाईंहरूले जस्तो व्यवहार गरिरहनुभएको छ, म त्यो स्तरको होइन । तपाईंहरू थोरै सम्मानका साथ बोल्न सिक्नुहोस् । हामी गत सिजनको ला लिगा च्याम्पियन हौं, १० वर्षअघिको होइन । अर्को कुरा, मेरो नेतृत्वमा रियल मड्रिडले च्याम्पियन्स लिगमा ह्याट्रिक गर्नु के भाग्यको खेल थियो ? कि गोलाप्रथामा परेको थियो ?
प्रकाशित मिति २४ माघ २०७७, शनिबार १४:५६
ला लिगाको उपाधि होडलाई लिएर ‘होच्याएपछि’ जिदानले पत्रकारलाई यसरी थर्काए !